Uncategorized | Myanmar My Always
Global Survey Says We’re Eating Better, But Our Diet Is Still Unsustainable. Advertisements
သခင်လား ကျွန်လား ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒ ဆိုတာ ပြည်ထေင်စုသားလူမျိုးကြီးဝါဒလို့ ပြောတာလား (၁) ကျည်လာရောင်းသူများ ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော့်လက်ထဲ ညူကလီယာဗုံးတစ်လုံးကို တိုင်းပြည်နာမည်ဟာ Burma ပါလို့ တစာစာ စောဒကတက်နေသူတွေကိုယ်တိုင် လာထည့်ပေးသွားတာပါ။ ကျွန်တော်ထင်တယ် ၅ ရက်လောက်ရှိသွားပြီ။ ကျွန်တောလဲ ဗာဟီရလေးတွေ များနေတာနဲ့ ကဲကဲ ခမြာများ နောက်ဆုံးအီးတစ်ချက် မထွက်ခင် စိတ်ကူးယဉ်ကြပါစေဆိုပြီး လွှတ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ခုတော့ ဒီဗုံးကြီးကို ကျွန်တော့်ဆီမှာလဲ မထားချင်တဲ့အတွက် သူတို့ဖက်ကိုပဲ လှမ်းပစ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဗုံးကြီးကို သေသေချာချာကြည့် နီနီရဲရဲကြီး၊ လေဘယ်က သုံးကြောင်းနဲ့။ ပေါက်မယ် တကဲကဲ၊ … Continue reading →
ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့ သန္တိသုခ ပီတိရပုံ
Posted on April 11, 2012	by nyuntshwe
“There is no fire like lust. There is no evil like hate. There is no pain like disharmony. There is no joy like NIRVANA.” (The Buddha, the Dhammapada, 15, 202). ဒီနေ့မနက် နန်းနဲ့ကဗျာချစ်သူတွေအတွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ အင်္ဂလိပ် အဆိုတစ်ခုကို လက်ဆောင်ပါးချင်ပါတယ်။ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ရင် အဓိကဆင်းရဲရတာ ခံစားရတာက … Continue reading →
Posted on August 19, 2011	by nyuntshwe